SIR LA HELAY: Xiddiga Ku Guuleystay Ballon d’Or Oo La Ogaaday Iyo Sida Ay U Kala Horreeyaan Messi, Van Dijk, Ronaldo, Salah & Mane - Gool24.Net
Isniinta berri waxa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa xiddiga ugu fiican caalamka ee la guddoonsiin doono abaal-marinta Ballon d’Or oo ay iskugu tartanka ugu adag uu ku dhex marayo Lionel Messi iyo Virgil van Dijk.
Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa min shan jeer oo hore ku soo guuleystay abaal-marintan, hase yeeshee xili ciyaareedkii hore ayaa waxa guulahoodii xidhiidhka ahaa kala jaray Luka Modric oo ka qaaday, sannadkana waxa la tartamaya difaaca Liverpool ee Van Djik oo kooxdiisa u qaaday Champions League, horyaalkana kaalinta labaad keenay.
Macluumaad lasoo dusiyey oo lasoo geliyey baraha bulshada qaarkood, ayaa waxay soo bandhigeen tobanka ciyaartoy ee codadka ugu badan helay ee ku jiray liiska tartameyaasha, waxaana ka mid ah saddexda xiddig ee ugu dambayn iskugu soo hadhay tartanka ee Ronaldo, Messi iyo Van Dijk.
Sawir laga qaaday Computer ay ku kaydsan tahay xogta codadka ayaa waxa uu caddeeyey in Lionel Messi uu abaal-marintan ku garaacay Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo, markii lixaad ee xirfaddiisana uu hantiyayo Ballon d’Or, sidaasna uu ku xiddhanyo rikoodh aanay cidina hortii u gaadhin oo qofka kaliya ee kusoo dhow uu yahay laacibka reer Portugal ee Ronaldo oo shan jeer lasoo caleemo saaray.
32 jirka reer Argentine oo markii ugu dambaysay ee uu Ballon d’Or hantiyaa ahayd 2015 ayaa xogta lasoo dusiyey ay sheegtay inuu helay 446 dhibcood, sidaana uu ku noqonayo xiddigga sannadka.
Difaaca Liverpool ee Van Dijk ayaa haysta 382 dhibcood oo kaalinta labaad galay, halka Mohamed Salah uu kaalinta saddexaad fadhiyo isagoo haysta 179 dhibcood iyo Ronaldo oo kaalinta afraad u degay oo haysta 133 dhibcood.
Sadio Mane ayaa kaalinta shanaad ku jira oo leh 97 dhibcood, Alisson Becker waxa uu haystaa 82 dhibcood, Kylian Mbappe ayaa 55 haysta, halka Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt iyo Eden Hazard ay kala heleen 30, 29 iyo 21 dhibcood sida ay u kala horreeyaan.